Home » Akụkọ ụgbọ elu » Volaris: 107% nke ikike 2019 na 82% ibu ihe na Eprel 2021
Volaris ji nwayọọ nwayọọ na-ahụ usoro ntinye akwụkwọ ka mma ka ndị ahịa na-eme atụmatụ maka njem mmiri na ọkọchị
Ike mba ụwa belata 16.7% na Eprel 2019
Volaris buuru ndị njem nde 1.9 na Eprel 2021
Volaris, ụgbọ elu ụgbọ ala dị ọnụ ala nke na-efe Mexico, United States na Central America, na-akọ Eprel 2021 mbido ụzọ mbata.
N'ahịa ndị Mexico anụ ụlọ, ọchịchọ na-aga n'ihu na-agbake, anyị wee nweta ohere iji tinye ikike, na-ejedebe ọnwa na 17.8% karịa ASMs (Miles Seat Miles) karịa Eprel 2019. Ike mba ụwa belatara 16.7% na Eprel 2019, n'ihi nsonaazụ nke COVID-19 metụtara mgbochi njem mba ụwa. Ngụkọta maka ọnwa Eprel nke ndị ASM tụrụ atụ bụ 107.3% nke otu ọnwa ahụ na 2019. Achọpụtara nke RPMs (Miles Passenger Miles) bụ 104.6% ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa na 2019. Volaris eburu ndị njem 1.9 nde na Eprel 2021, 3.3% dị elu karịa Eprel 2019, na ihe eburu ibu bụ 82.4%.
Onye isi oche Volaris na Chief Executive Officer, Enrique Beltranena, na-ekwu banyere nsonaazụ okporo ụzọ maka Eprel 2021, kwuru, sị: “Anyị nwetere mgbake na Eprel ma anyị kwenyere na enwere ohere maka imeziwanye na ahịa US na-agafe oke n’ọnwa ndị na-esote. Anyị ji nke nta nke nta na-ahụ usoro ntinye akwụkwọ ka mma ka ndị ahịa na-eme atụmatụ maka njem mmiri na udu mmiri, ọkachasị na isi anyị VFR na ngalaba ezumike.
Na nkeji nke abụọ nke 2021, Companylọ ọrụ ahụ na-atụ anya ịrụ ọrụ ihe dịka 110% nke ikike 2019 nke abụọ.
Tebụl na-esonụ na-achịkọta nsonaazụ okporo ụzọ Volaris maka ọnwa Eprel 2021.
mgbanwe April 2019
mgbanwe YTD Eprel 2021 YTD Eprel 2020
mgbanwe YTD Eprel 2019
Ọ bụ 1,423 425.5% 13.1% 4,679 19.0% 0.7%
Ọ bụ 1,701 480.2% 17.8% 5,739 26.2% 6.0%
Ọ bụ 83.7% (8.7) p (3.5) p 81.5% (4.9) p (4.2) p
International 78.3% 11.2 p (0.4) p 72.7% (8.5) p (5.9) p
Total 82.4% (5.0) p (2.2) p 79.4% (5.5) p (4.2) p
Ọ bụ 1,606 478.8% 6.7% 5,203 15.4% -5.5%